Life Style | J-Myanmar
Posts in category Life Style
ပြီး​ခဲ့​တဲ့ ရက်​သတ္တ​ပတ် အနည်းငယ်​က နီ​ပေါ​ငလျင်​အပြီး လူ​မှု​မီ​ဒီ​ယာ​တွေ​မှာ တ​ဦး​ကို တ​ဦး​ဖက်​တွယ်​ထား​ကြ တဲ့ ကလေး​ငယ်​နှစ်​ဦး​ရဲ့​ပုံ​ဟာ “နီ​ပေါ​နိုင်ငံ​မှ (၂)နှစ်​အရွယ် ညီမ​ငယ်​လေး​ကို စောင့်ရှောက်​နေ​တဲ့ (၄)နှစ်​သား​အရွယ် အစ်ကို”ဆို​တဲ့ ခေါင်းစဉ်​နဲ့ ဖေ့​ဘုတ်​နဲ့ တွစ်​တာ စာ​မျက်နှာ​တွေ​မှာ အလျင်အမြန်​ပျံ့နှံ့ နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒီ​ဓါတ်​ပုံ​ဟာ လူ​မှု​ကွန်ရက်​စာ​မျက်နှာ​တွေ​မှာ အများ​ဆုံး ဖော်​ပြ​ခြင်း​ခံ​ရ​တဲ့ ပုံ​တစ်​ပုံ​လည်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ မြင်​ရ​တဲ့​သူ​ကို စိတ်​မ​ကောင်း​ကြီး​စွာ​ဖြစ်​စေ​တဲ့ ဒီ​ဓါတ်​ပုံ​ထဲ​မှာ​တော့ ကလေး​ငယ်​နှစ်​ဦး​ဟာ တစ်​ဦး​ကို​တစ်​ဦး ဖက်​တွယ်​ထား​ကြ​ပြီး မိန်း​ကလေး​ငယ်​လေး​ဟာ သူ့​အစ်ကို​ကို တွယ်ကပ်​ရင်း သူ​တို့​အတွက် ပြင်​ပ​ကမ္ဘာ​မှာ နား​ခို​ရာ​နေရာ​ကို လှမ်း​ရှာ​နေ​သ​လို အနေအထား​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်။ အစ်ကို​ဖြစ်​သူ ယောက်ျား​ကလေး​ရဲ့ မျက်လုံး​ထဲ​မှာ​လည်း အကြောက်​တရား​တွေ​နဲ့ ပြည့်​နှက်​နေ​တာ​ကို တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ မြင်​ရ​သူ​အဖို့ ဝမ်းနည်း​ကြေကွဲ​သွား​စေ​မယ့် ပုံ​တစ်​ပုံ​လည်း ဖြစ်​ပါ​တယ်။ …
လက်​ဝှေ့​သမား​တစ်​ယောက်၊ ခေါင်းကိုင်​ဖ​ခင်​တစ်​ယောက်၊ သူတော်​စင် တစ်​ယောက်၊ နိုင်ငံ​ရေး​သမား​တစ်​ယောက်…….Manny မ​လုပ်​နိုင်​သေး​တာ ကမ္ဘာပေါ်​မှာ ရှိ​သလား?? မန်​နီ​ပတ်​ကီ​အောင်း(Manny Pacquiao) ကို လက်​ဝှေ့​သမား​တစ်​ယောက်​အဖြစ် သမုတ်​ကြ​တာ​ဟာ မ​ဟတ္တ​မ​ဂန္ဒီ​ကို ဟိန္ဒူ​ရှေ့နေ​တစ်​ယောက်​အဖြစ် ခါ်​ဆို​ကြ​သ​လို မ​ပြည့်စုံ​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်​မှာ အကြီး​ကျယ်​ဆုံး လက်​ရည်တူ ထိုး​သတ်​သူ​တွေ​ဟာ သူ့​ရဲ့​သွေးသံ​ရဲ​ရဲ အား​ကစား​တွေ​ထက် ပို​ပြီး​တိုး​ကာ ခန့်​မှန်း​မ​ရအောင် ဝေး​သ​ထက်​ဝေး​သွား​ပါ​ပြီ။ ကမ်း​ကုန်​သော​ဆင်းရဲ​မှ ု​နဲ့ မွေး​ဖွား​လာ​တဲ့ ဖိ​လစ်​ပိုင်​မှာ​တော့ WBO ဝယ်​တာ​ဝိတ် ချန်​ပီ​ယံ​က ဘာသာ​ရေး​ပုံ​ရိပ်​ဖြစ်​လု​နီးပါး​ပါ​ပဲ။ အမေ​ရိ​ကား​မှာ​တော့ သူ​ဟာ Manny Pacmanပါ – Las Vegas ရဲ့ မဟာ​ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ​မှ အတု​ယူ​နိုင်​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ်​ပါ။ စဉ်​ဆက်​မ​ပြတ်​တဲ့ Queensbeery boxing ၏ ဘ​ရုစ်​လီ​လည်း ဖြစ်​ပါ​တယ်။ …
သမီး….. ကိုယ်​ဒီ​တစ်​သက်​လုံး​မှာ ကိုယ်​ဘာ​ပဲ​လိုချင်​လိုချင် ကိုယ့်ကို​တိုင် ဝယ်​နိုင်​ဖို့ ကြိုးစား​ရ​ပါ​မယ်။ တစ်​ယောက္ယောက် ဝယ်​ပေး​ဖို့ ဘယ်​တော့​မှ မမျှော်​လင့်​သင့်​ပါ​ဘူး။ မ​သေချာ မ​ရေရာ​တဲ့ လောက​ကြီး​မှာ “အားကိုး​ရ​တယ်” ဆို​တာ မ​ရေရာ​ဆုံး​အထဲ​မှာ ပါ⁠ပါ​တယ်။ သမီး…… ကိုယ်​အလေး​ချိန်​လျှော့​မယ်။ ဝိတ်​လျှော့​မယ် ဆို​တာ​မျိုး စကား​အဖြစ်​ပြော​ကြည့်​တာ​ပဲ​ကောင်း​ပါ​တယ်။ သမီး​သိ​ရ​မှာ​ကျန်းမာ​ရေး​ဟာ အဓိက အကျ​ဆုံး​ပါ​ပဲ။ ဘယ်လောက်​ပဲ ပိန်​ပိန်၊ ဘယ်လောက်​ပဲ စ​လင်း​ကျ​ကျ မ​ကျန်းမာ​ရင် အလကား​ပါ​ပဲ။ လှပ​တာ​ထက် ကျက်သရေ ရှိ​တာ​က ပိုမို​တင့်တယ်​တတ်​ပါ​တယ်။ ကျက်သရေ​ရှိ​ဖို့​ဆို​ရင် အတွေး​အခေါ်​ရှိ​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ်။ အတွေး​အခေါ်​ရှိ​ဖို့ စာ​များ⁠များ​ဖတ်​ဖို့ လို​အပ်​ပါ​တယ်။ တကယ်​လို့ သမီး​က ဖက်​ရှင်​ကျ​ကျ မ​ဝတ်စား​တတ်​ဘူး ဆို​ရင် ရိုး⁠ရိုး​ရှင်း​ရှင်း ဝတ်စား​ဆင်ယင်​တာ​က ပို​ပြီး ကျက်သရေ ရှိ​တတ်​ပါ​တယ်။ …
phyo, Apr 9, 2015
ကြိုက်​လွန်း​လို့..အကြိမ်ကြိမ် ပြန်​ဖတ်​ပါ​တယ်..ဖတ်​ပြီး​တိုင်း​လဲ​ပြန်​မျှဝေ​ပေး​ချင်​တဲ့ စိတ်​ကြောင့်…ပြန်​တင်​ပေးလိုက်​ပါ​တယ်နော်…မ​ဖတ်​ရ​သေး​တဲ့​သူငယ်​ချ​င​္း​တွေ​အတွက်​ပါ……… ဒီ​စာ​လေး ဖတ်​ပေး​ပါ​အုံးနော်……. သိပ်​ကောင်း​တဲ့ စာ​လေး​ပါ၊ ဒီ​စာ​လေး​ဖတ်​ပြီး ဒဏ်ရာ​တွေ​များ​ရှိ​နေ​လို့ ပျောက်​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင်……… ဒီ​စာ​လေး​ကို​ကျေးဇူးပြု​ပြီး ဆုံး​အောင်​ဖတ်​ပေး​ပါ…. ဟို​တုန်း​က အင်မတန်​မှ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်​တဲ့ ကောင်​လေး တစ်​ယောက်​ရှိ​သ​တဲ့။ တစ်​နေ့​ကျ​တော့ သူ့​အဖေ​က ကောင်​လေး​ကို အိမ်​ရိုက်​သံ​တစ်​ထုပ် ပေးလိုက်​ပြီး ပြော​ပါ​တော့​တယ်။ မင်း​တစ်​ခါ စိတ်တို​တိုင်း သံ​တစ်​ချောင်း​ကို​နောက်ဖေး က ဝင်း​ထရံ​တိုင်​မှာ သွား​ရိုက်​ချေ​ကွာ​တဲ့။ အဖေ​က အဲ​ဒီ​လို​ပြော​ပြီး သံ​ထုပ်​ကို​ပေးလိုက်​တဲ့ ပထမ​နေ့​မှာ ကောင်​လေး​ဟာ ဝင်း​ထရံ​တိုင်​မှာ သံ​ပေါင်း ၃​၇ ချောင်း​ရိုက်​သွင်း ဖြစ်​သွား​တယ်။ အဲ​ဒီ​လို​နဲ့​သူ​စိတ်တို​တိုင်း သံလေး​တွေ​ကို ဝင်း​ထရံ​မှာ ရိုက်​ရင်း​ရိုက်​ရင်း ကောင်​လေး​ဟာ သူ့​စိတ်​သူ ထိန်း​နိုင်​လာ​သ​တဲ့။ သံ​ရိုက်​ချက်​တွေ​ဟာ​လည်း တစ်​နေ့​ထက်​တစ်​နေ့ ကျဲ​လာ​ခဲ့​တယ်။ …
ငါ​နဲ့​မ​ဆိုင်​ပါ​ဘူး..ငါ့​အလုပ်​မဟုတ်​ပါ​ဘူး..လို့​တွေး​မိ​ရင် ကြွက်​ဟာ အက်ကွဲ​နေ​တဲ့ အုတ်​နံရံ ကြား​က​နေ လယ်သမား လင်မယား၊ အထုပ်​တစ်​ထုပ်​ဖြေ​နေ​တာ​ကို စိတ်​ဝင်​တ​စား ကြည့်​နေ​လေ​ရဲ့။ အထဲ​မှာ ဘာ​မုန့်​များ​ပါ​လေ​မ​လဲ​လို့​စိတ်​ထဲ​က မျှော်​တ​လင့်⁠လင့်​နဲ့ ကြည့်​နေ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့်​သူ​စိတ်ပျက်​စွာ​မြင်​တွေ့​လိုက်​ရ​တာ​က ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်​ခု။ လယ်သမား​ကြီး​ဟာ အိမ်​ထဲ​က တစ်​နေရာ​မှာ သွား​ချထား လိုက်​တယ်။ အဲ​ဒါ​ကို မြင်​လိုက်​တဲ့​ကြွက်​ဟာ​အားရ​ပါး​ရ အော်​ပြီး လယ်​ကွင်း​ထဲ​ပြေး​ထွက်​သွား​တယ်။ အားလုံး​ကို သိ​စေ​ချင်​လို့ အသိ​ပေး​တဲ့ သဘော​ပေါ့။ အိမ်​ထဲ​မှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်​ခု ရှိ​တယ်​ဗျို့၊ အိမ်​ထဲ​မှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်​ခု ရှိ​တယ်​ဗျို့..။ မြေကြီး​ကို ခြေထောက်​နဲ့​ယက်​ပြီး အစာ​ရှာ​နေ​တဲ့ ကြက်ဖ​ကြီး​က ခေါင်းမော်​ကြည့်​ပြီး စိတ်ပျက်​တဲ့​လေသံ​နဲ့​ပြော​လိုက်​တယ်။ အော် … ကို​ကြွက်​ရယ်၊ မင်း​အတွက်​တော့​သေ​တွင်း​ပဲ​လို့ ငါ​ပြော​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် …